သင့်ကုမ္ပဏီဘယ်လောက်ကျပါသလဲ | Martech Zone
Wal-Mart တစ်ခုပဲရှိတယ်။ Wal-mart သည်တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းသာရှိသောစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Wal-Mart နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနောက်လက်လီရောင်းတဲ့ဆိုင်ထက်တူညီတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဈေးသက်သာစွာရောင်းနိုင်လို့ပဲ။
သင် Wal-Mart မဟုတ်ဘူး နေ့စဉ်ဈေးနှုန်းကိုဘယ်လိုလျှော့ချရမှန်းမသိအောင်သင်အလုပ်မသွားနိုင်ပါ။ သငျသညျမသငျ့သညျ။ သင့်ကုမ္ပဏီသည်ထူးခြားပြီးမည်သည့်ကုမ္ပဏီမှကမ်းလှမ်းထားသည့်အရာမရှိပါ။
သင်၏စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်မှာဖြစ်သင့်သည် ခှဲခွား ယှဉ်ပြိုင်မှုအကြားသင်ကိုယ်တိုင်။ မပြိုင်ပါနဲ့! မင်းနဲ့မတူတာကမင်းနဲ့ဘယ်လိုအလားအလာရှိသလဲဆိုတာကိုရှာကြည့်ပါ။ သင်၏အလားအလာများကိုသင်၏ဖောက်သည်များအတွက်သင်မည်သို့တင်ပို့သည်ကိုရည်ညွှန်းချက်နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအကောင့်များဖြင့်ဖော်ပြပါ။
underdeliver = အလွန်အကျွံငွေယူသောကုမ္ပဏီများ
ကြှနျုပျ၏ရိုးသားသောထငျမွငျခကျြအရဒါတွေဟာ သာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ။ ဖြန့်ဝေသောကုမ္ပဏီများ မပေးနိုင် အလွန်အကျွံငွေ, သင်ပေးဆောင်စျေးနှုန်းပေးပို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအနှုန်းနှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်တူကျသည်။
ဖြန့်ဖြူးသောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့ပေးသည့်ပမာဏ၏မှန်ကန်သောပမာဏသို့မဟုတ်တန်ဖိုးအောက်တွင်ရှိသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာ undercharge ။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းသူတို့ထဲကတ ဦး တည်းပါပဲ။
ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီကုန်ကျသောစျေးသည်များကိုငါမြင်သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများရှိသည် နောက်ထပ် တန်ဖိုးထားပေမယ့်သူတို့ကဖော့နေဖို့ရုန်းကန်။
သင်ဟာ Wal-Mart မဟုတ်ပါ၊ သင်လိုချင်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပါ။ မင်းကပိုထိုက်တယ်။
Tags: adeolonohအမှတ်တံဆိပ်သတင်းစာပညာChandlerကုန်တင်ဖောင်းပွbရာဝတီမိုဘိုင်းဂီတဂီတမိုဘိုင်း appမြနေSpotifyဇာတ်လမ်းပြောပြ
Mobile Textarea - စာလုံးဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့သလဲ
26:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 16 မှာ
အာမင် Doug! ငါတကယ်ပိုပြီးသဘောတူနိုင်ဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် PRICE ကိုအလွန်စွဲလမ်းသွားသည်မှာဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတကယ့်တန်ဖိုးကိုပြသရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်! တစ်ခုတည်းသောငွေရောင်နံရံသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားအမှန်တကယ်ပို့ပေးလျှင် (ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကမဟုတ်သည့်အတွက်) သူတို့သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတန်ဖိုးထားပြီးအခြားသူများအား (၎င်းအားမျှော်လင့်ရန်) အကြံပြုလိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းနှင့်တန်ဖိုးအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှုမှာတကယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်
27:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 22 မှာ
စက်တင်ဘာ 27, 2008 မှာ 10: 59 AM
Doug ကောင်းသော post နှင့်အပေါ်အစက်အပြောက်။ ကျွန်ုပ်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ခွဲခြားရန်နှင့်လေးနက်သောနည်းများကိုပျော်စရာနည်းများဖြင့်ကြိုးစားရန်အမြဲကြိုးစားနေသည်။ အလုပ်လုပ်ပုံရသည်
ငါမကြာသေးမီကစီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ဆောက်ခဲ့သည်, ငါ 100% ယုံကြည်မှုဖြစ်ကြောင်းကိုငါဘောင်ရှိအခြားလူများထက်ပိုကောင်းတဲ့, ပိုပြီးအောင်မြင်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုဖြစ်၏ £££သို့သွားပြီးသူတို့မှာ“ အတိုင်ပင်ခံ” ဖြစ်စေ၊ အေဂျင်စီကြီးတစ်ခုဖြစ်စေလိုချင်သည်ဖြစ်စေသွားမှာပါ။